Netflix ၏ချဉ်းကပ်မှုပိုမိုကောင်းမွန်သည်အဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » Entertainment Netflix ၏ချဉ်းကပ်မှုပိုမိုကောင်းမွန်သည်အဘယ်ကြောင့် "ဒါကဖြစ်ပါသည် - BGR
Netflix ၏ချဉ်းကပ်မှုပိုမိုကောင်းမွန်သည်အဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ - BGR
Tele RELAY တစ်ခု 8 စက်တင်ဘာလ 2019
သင်ဤရက်သတ္တပတ် Netflix နဲ့ထံမှခေါင်းစဉ်တွေထဲကအထူးအာရုံကိုပေးဆောင်ကြလျှင်, သင်ဖြစ်ကောင်းပေါ်ထွန်းရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ် - ကျွန်တော်တို့ကိုဦးအပါအဝင် - Netflix နဲ့အသစ်တခုတီဗီရာသီအတွက်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလွှတ်ပေးရန်အချိန်ဇယားနှင့်အတူစမ်းသပ်ကြောင်း။ ဖြစ်ပျက်မှု၏ရေတိုဗားရှင်း: သူတို့ကနဲ့တူအဖြစ်မှန်ပြပွဲများမှာ မဟာဗြိတိန်မုန့်ဖုတ်ပြရန် ကြောင်း Netflix ပေါ်တွင်ပေါ်လာကျနော်တို့ကအရမ်းနီးပါး week- ကနေဆွဲထားသောလူကိုစောင့်ရှောက်ရန်လူစုခွဲခြင်းကိုအဘယ်သူအကြောင်းပြောနေတာနေကြတယ်
မှန်ကန်စွာဒါနှင့် - သို့သျော, Netflix ဟာသူမလုနီးပါးအရာအားလုံးကို, စိစစ်ဆွေးနွေးချီးမွမ်းဝေဖန်သောမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်ဒါအလွန်ကြီးမားသောတစ်အင်အားစုဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, streamer တုန့်ပြန် ယခုအပတ်အနည်းငယ်ခြွင်းချက်နှင့်အတူကြောင့်ဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးထက်ပိုသောပြဿနာချဉ်းကပ်နည်းဖြစ်သည့်လာရန်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်အချို့ကိုမတူပဲ, ရှိသမျှတပြိုင်နက်၎င်း၏လွှတ်ပေးရန်အချိန်ဇယားအပေါ်ကိုပြန်မသွားမျှော်လင့်ထားပါဘူး, သော။
Netflix ဟာ Apple နှင့်ဒစ္စနေး (ဒစ္စနေးနှင့် Apple TV ကို +) အပြိုင်နိုဝင်ဘာလထဲမှာမျှော်လင့်ထားကြသည်နှင့်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးန်ဆောင်မှုများ၏မူရင်းရုပ်မြင်သံကြားအကြောင်းအရာဖြစ်စဉ်များ၏အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်အချိန်ဇယားအပေါ်အားကိုးလိမ့်မယ်။ ပထမတစ်ချက်မှာအဘယ်အရာကိုပင်သင်တို့တွင်အချို့သောပညာရှိပုံပေါ်ပေလိမ့်မည်။ ပြီးသားသူကသိတယ်အကြောင်းအရာကြီးမားတဲ့ stack ရှိကြောင်းကိုသိရာဒစ္စနေး, အထူးသဖြင့်အတူ - နှင့်ဒါကြောင့်သင်၌စာရင်းပေးသွင်းခြင်း, ပြီးတော့တပတ်အကြာတွင်ရက်သတ္တပတ်နေဖို့ရန်သင့်အားအတင်းအကျပ်အားဖြင့်မာရ်နတ် Netflix နဲ့ပြန်လာဆန့်ကျင်နေတဲ့စစ်တိုက်မဟာဗျူဟာအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည် ။ ထို့နောက်သူကအချိန်ဇယားဆွဲ၏ extension ကိုလည်းလူတွေစကားပြောထားတဲ့ကာလအတွင်းအချိန်ကိုပြတင်းပေါက်တိုးချဲ့ကြောင်းဖွယ်ရှိသည်စီးရီးကဆိုသည်။
သို့သော်ဤမေးခွန်းကိုလေ့လာနေနှစ်ကြာခဲ့သူ Netflix, နှင့်အညီသင်စားသုံးသူ satisfaitz ဘယ်လိုမဟုတ်ပါဘူး။ 19659002] ကြည့်ရှုသူများသည် တတျနိုငျသဖြစ်နိုင်သည် မိမိအဒရိုင်ဘာကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပြပွဲများတွင်ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအား, ဒါပေမယ့်ဒီ streamer ၏သုတေသနအရသိရသည်နီးပါးဘယ်တော့မှအမှုဖြစ်ပါသည်ရ။ တကယ်တော့, Netflix နဲ့ထုတ်လွှတ်မှုစျေးကွက်အပေါ် 20 16 ထက်ပို၏လေ့လာမှုတစ်ခုအပေါ်အခြေခံပြီး, ငါးနှစ်အကြောင်းကိုအဲဒီမှာဒီသဘောပေါက်ထားပါတယ်, သင်ပြီးပြည့်စုံသောရလဒ်များကိုရှာတှေ့နိုငျ ici .
Image ကိုရင်းမြစ်: နီကိုးလ် Wilder / AMC / Sony က / Kobal / Shutterstock ဓာတ်ပုံ
ဥပမာတစ်ခုကိုးကားရန်: တွေ့ရှိချက်အရသိရသည် Netflix နဲ့ကယေဘုယျအားဖြင့်လေးမျိုးဖြစ်စဉ်များကိုယူကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်ထားပါတယ် ။ ] သာ. ကောင်း၏ရှောလုသည်ပဌနာ -ချွတ်လည်စွဲခံရမှုမတိုင်မှီ ဆိုးဝါးစွာချိုးဖောက်ခြင်း ။ အတွက် အရူးယောက်ျား သောတာနှေးလောင်ကျွမ်းခြင်း, Netflix နဲ့ခြောက်လဖြစ်စဉ်များကိုယူသောဒေတာများပြသသည်။ အတွက် ငါဘယ်လိုသင့်ရဲ့မိခင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး က 8 ယူခဲ့ပါတယ်။
ကြည့်ရှု၏ 70% ထို့နောက်အနည်းဆုံးရာသီနှင့်အခြားရာသီပြီးစီးသောအခါဤဝေဒနာဖြစ်ကြသည်။ "ထုတ်လွှတ်မှုစျေးကွက်အပေါ်ကျော် 20 16 ၏ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှု," Netflix, Ted Sarandos ကနေအကြောင်းအရာများအတွက်ထို့နောက်တာဝန်ရှိက "ကျနော်တို့အဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်မောင်းသူဆွဲထားဖူးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်ကိုတစ်ကြိမ်မှာငါတို့၏ကိုယ်အင်္ဂါအပေါငျးတို့သဖြစ်စဉ်များပေးသောယုံကြည်မှုပိုပြီးပရိသတ်တွေထုတ်လုပ်သောမည်သို့နှင့်အညီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးသည်။ "
ဒီစမ်းသပ်မှုကြည့်ရှုသူ၏အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. အချို့သောအရေးကြီးသောအတွက်အသိပေးချက်သတိပြုပါ။ အဘယ်အရာကိုတိုင်းတာခဲ့ပါတယ်ရရှိနိုင်ပါနှင့် Netflix အပေါ်ပြေဖို့အဆင်သင့်အကြောင်းအရာအပြည့်အဝရာသီနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရှု၏အပြုအမူဖြစ်ခဲ့သည်။ Netflix ကဲ့သို့တူညီသောခေတ်စားလာခြင်းနှင့်ကွာချိန်းကနေပထမဦးဆုံးအရာအရပျရှိလူများ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတီဗီဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။
ဒါဟာကြည့်ရှုသူအချို့, တစ်နည်းနည်းနဲ့, မျှော်လင့်ချက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌၎င်းတို့၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြောင်းလဲပြီဖြစ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ခုသာအပတ်စဉ်ရရှိနိုင်မှုရှိပါတယ်တဲ့ကိစ္စကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာ။ ပြီးတော့ Hulu နဲ့တူန်ဆောင်မှုတစ်ခုနှေးကွေးအပတ်စဉ်ထုတ်ဝေအချိန်ဇယားလူတွေကိုလေ့ရှိသည်ဟုဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိပါတယ်။ ကျွန်မဤလူလူနည်းစုပိုင်ကြောင်း, သို့သော်သံသယ - နှင့်ဤအလေးအနက်ထားကို Apple TV ကိုကြိုးစားအားထုတ်မှုတားဆီးမည်, အဓိကအားဖြင့်ကအနည်းဆုံးပြီးသားအမှတ်တံဆိပ်အပေါ်အခြေခံပြီးအများအပြားအစီအစဉ်များကိုကမ်းလှမ်းရာဒစ္စနေး, နှိုင်းယှဉ်အသစ်သောစီမံကိန်းများပါဝင်သည်ရာ အားလုံးအားဖြင့်လူသိများနှင့်တန်ဖိုးထား။ အဖြစ် Star Wars .
ထိုသို့အကြီးအလိုင်းနဲ့တူရဲ့ အဆိုပါကြေးနန်း သငျသညျရှငျဘုရငျမှာလာလျှင် "သင်သည်တစုံတခုကိုလက်လွတ်မပါဘူး။ နောက်ကျောများတွင်ချည်ထားတစျခုလက်နှင့်အတူတူပင်ရန်ပွဲ။ အပတ်စဉ်ထုတ်ဝေအချိန်ဇယားနှင့်အတူ Netflix နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်နည်းနည်းဒီနဲ့တူလှပါတယ်။
Image ကိုရင်းမြစ်: Valentin Wolf က / Imagebroker / Shutterstock
မကောင်းတဲ့ဘဝအတှကျအကောင်လေးတွေ, လုယူရာဥစ္စာ၏ငှက်, Jojo ယုန်နှင့် - BGR